Ungasiguqula kanjani isandiso seFirefox futhi wakhe i-. | Kusuka kuLinux
Lokhu engikukhombisa kona ngezansi ngifunde ukukwenza izolo futhi ngifuna ukukuhlanganyela nawe ngoba mhlawumbe usesimweni esifanayo nami.
Iphuzu ukuthi ngafaka i- Isandiso shayela I-Screengrab, esivumela ukuthi sithwebule amawebhusayithi esiwavakashelayo njalonjalo. Inkinga ibilula kakhulu, isithonjana esivele kubha yamathuluzi Firefox yaphuka ngokuklanywa kokunye, okungukuthi, kwakubukeka kabi kakhulu.
Yini engangeni emehlweni ami ... kahle, lokho akungeni kimi futhi ngalolo hlobo lwemininingwane ngikhetha kancane. Kepha sawubona esihlokweni sokuqala. Ngavula I-Inkscape futhi ngazenzela isithonjana esisha, ukuthi yize singesona esihamba phambili emhlabeni, sibukeka singcono kunesokuqala. Kepha ungayifaka kanjani kusandiso?
IFirefox inezandiso ezithile ezivele zivule iziphu zibe kumafolda ngaphakathi / ikhaya / /.mozilla/firefox/ .default / extensions /, kepha kukhona okunye okusala njenge- .xpi njengoba kwenzeka I-Screengrab.
Into yokuqala engiyenzile ukuvula iziphu .xpi usebenzisa Ark el Imenenja yefayela de KDEe I-GNOME bangakwenza nge Ifayela-Roller. Ngaphakathi kufolda ebingafakwanga uziphu, ngibheke izithonjana ebengidinga ukuzilungisa, ezaziku- ifolda-screengrab / chrome / isikhumba /, ngawabeka ngosayizi ofanayo ngqo, kepha ngisebenzisa elami.
Silungile .. futhi manje kuza umlingo. Okufanele sikwenze ukukhetha wonke amafolda namafayela angaphakathi kwefolda engafakwanga uziphu (hhayi ifolda uqobo), futhi uma esekhethiwe wonke, siwacindezela .zip. (Kufanele ibe .zip)
Kufayela elenziwe, sishintshe igama nesandiso. Endabeni yami ngafaka screengre.xpi
Konke okusele ukufaka isandiso kusuka kumphathi wezengezo Firefox futhi voila .. Nawu umphumela 😛
Kwirekhodi, ngaphambi kokushintsha noma yikuphi ukunwetshwa, futhi ngokuya ngokusetshenziswa okuzonikezwa, kubalulekile ukubheka ikhasi lezandiso I-Mozilla noma kuwebhusayithi yombhali uhlobo lwelayisense analo, akuyona into esephula umthetho.
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungadala kanjani isandiso kusuka ekuqaleni, ngakho konke okudingayo nokuningi, ungabonisana lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ungasiguqula kanjani isandiso seFirefox bese wenza i-.xpi?
Iyiphi ingqikithi ye-firefox oyifakile?
Ngiyabonga .. Kuhlala kusiza uma sifuna izinto ngendlela esithanda ngayo
Ingabe inqubo iyafana ne-Chrome kanye nokuphuma kokunye?
Ithiphu enhle kakhulu. Kuyaziswa ...
Ngicabanga ukuthi ngokwenza lokho sizolahlekelwa izibuyekezo ezivela kumbhali
Ithiphu enhle kakhulu!
Ithiphu enhle kakhulu, ngiyabonga elav.
Ngakho-ke ingabe zimane nje .zip? Futhi imfihlakalo engaka yalokho?
Okubi kakhulu nokubi iMozilla.
Ithiphu enhle, ngiyabonga ngokwabelana.
ubulindeleni? ukubalwa kwe-subatomic noma ini? Ungamangala ukwazi ukuthi mangaki amafomethi, avulekile futhi avaliwe, kuphela iziqukathi ezinesandiso esishintshiwe futhi yilokho kuphela, ngendlela izandiso ze-chrome nazo, angisebenzanga nezandiso ze-opera kodwa ngeke ngimangale
Qaphela ukugibela ihhashi eliphakeme kunalelo ongagibela kulo, ukushaya kuzoba namandla, salami.
Ithiphu enhle kakhulu yokushintsha lezo zimpawu ezimbi (ngiyethemba angiphuli umthetho). 🙂
Kuhle !! Ngiyabonga kakhulu ngokuthunyelwe! 🙂